Par Taratra sur 11/01/2021
Fanondranana an-tsokosoko… lesoka hakana lesona
Misy ho sahy hanondrana an-tsokosoko volamena 73,5 kilao amin’izao, raha tsy efa niainga sy nanandrana ary nahavita nanondrana 1 kilao, ohatra, nitombo ho 5 kilao, 10 kilao, 50 kilao… ? Raha mbola azo natao mihoatra ny 73,5 kilao aza izany, ohatra, ho natao. Izay aloha ny teo an-tanana? Mety tsy vao izao izay fanondranana an-tsokosoko izay. Efa ela? Mila fanadihadiana lalina, fampiharan-dalàna henjana.
Misy hahavita manondrana an-tsokosoko volamena efa ho 100 kilao amin’izao koa? Mandalo eo ambany maso… tsy hita. Na isan-tsehatra na ambaratonga… Misy tambajotra matanjaka? Miara-dalàna amin’izany ny fandehanan’ny fiaramanidina mitondra enta-mavesatra tsy nahazo alalana, tsy misy fanaraha-maso na izay fepetra ara-pahasalamana ahay ihany aza, ohatra, amin’izao mbola fanidina sisintany izao.
Santionany amin’izay mety mampieritreritra ny olom-pirenena amin’izao raharaha izao ireo. Azo saintsainina avokoa izay mety ho efa fanaon’ny sasany izay ela izay, amin’izany rehetra izany. Tsy araka sy tsy fantatra? Tsikombakomba ratsy na kopaka isasahana, fanaovana kolikoly avo lenta, fiheveran-tena ho tsimatimanota… Izao vao vaky bantsilana? Amin’izay, tany ivelany no sarona fa tsy teto an-toerana ahay.
Aiza na iza no lesoka… hakana lesona? Izay tompon’andraikitra ankolaka na mivantana. Volamena aloha izao no tratra, fa mety ho eo ny harem-pirenena hafa. Andramena, vatosoa, sokatra, harena an-dranomasina… Efa samy nahabe resaka sy adihevitra avokoa talohaloha tany noho ny gaboraraka hatramin’izay? Saika vitavita sy tsy hitahita ho azy amin’izao izay tohiny sy farany, na ahina sy arahi-maso aza.
Tsy mahagaga raha mitondra faisana amin’ny fahantrana lalina sy maharitra ny vahoaka… maty tsy manota. Mbola misy ihany tsinona ny hoe tsimatimanota. Soa ihany, nilaza ny eo anivon’ny fitondram-panjakana fa tsy misy indrafo ny amin’izao fambotriana firenena izao. Ahoana koa àry ny amin’ny sehatra hafa? Tsy aiza fa eny ho eny ihany ny vano mitsaingoka ny sahona, ny takatra mihinana ny valala.